When You Do Something Beautiful and Nobody Noticed, Do Not Be Sad. For the Sun Every Morning Is The Beautiful Spectacle and yet Most of the Audience Still Sleep.
ဒီစကားကိုပြောကြားထားတဲ့သူကတော့ နာမည်ကျော် တေးဂီတဝိုင်းဖြစ်တဲ့ The Beatles အဖွဲ့ရဲ့ Founder လည်းဖြစ်သလို အဖွဲ့ရဲ့ Lead Guitarတီးပြီး တေးသီချင်းသီဆိုသူလည်းဖြစ်တဲ့ John Lennon ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစကားကတော့ မိမိရဲ့လုပ်ဆောင် မှုတွေကို အများက အသိမှတ်ပြုသည်ဖြစ်စေ မပြုဘူးဖြစ်စေ မိမိလုပ်ဆောင်စရာရှိတာကို ဆက်လက်လို့အကောင်းဆုံး လုပ် ဆောင်သွားဖို့ကို နေမင်းကြီးနဲ့နှိုင်းယဉ်တိုက်တွန်းထားတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာ ကောင်းမွန်နေပေမယ့် လှပခြင်းများစွာနဲ့ လောကကိုအကျိုးပြုနေပေမယ့် လူတွေသတိမထားမိဘူးဆိုရင်လည်း စိတ်ပျက် ဝမ်းနည်းမနေပါနဲ့တဲ့။ နေမင်းကြီးဟာ သူရဲ့ပရိသတ်ဖြစ်တဲ့လူသားတွေအများစုမနိုးထသေးတဲ့ မနက်ခင်းအချိန်တိုင်းမှာ တောက်ပလင်းလက်ခြင်းနဲ့ ပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်တဲ့။
လူသားတချို့ရှိပါတယ်။ မိမိလုပ်ဆောင်သမျှဟာ အကောင်းဘက်ကိုဉီးတည်လုပ်ဆောင်ပြီး အများသိဖို့ အထူးတလည် အားမ ထုတ်ဘဲ မှန်တန်းလေး လုပ်သွားတဲ့သူတွေပါ။ မိမိရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကနေ ရလာတဲ့အကျိုးဆက်ကို တခြားသောသူတွေ ခံစားနေတာကို ကြည့်ပြီး နောက်ကွယ်ကနေပဲ ပီတိကို ခံစားတတ်ကြတာပါ။ တချို့ကျပြန်တော့လည်း မိမိရဲ့လုပ်ဆောင်မှုနဲ့ ထပ်တူ အများရဲ့ အားပေး ထောပနာစကားသံတွေကို မက်မောကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် နည်းနည်းလေး လုပ်ရင်တောင်မှ အများ သတိထားမိအောင် ပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကလည်း လူတစ်ကိုယ်အကြိုက်တစ်မျိုးလို့ ဆိုရမလို လူသားဆန်တဲ့ လူသားတွေထဲက လူသားစရိုက်တစ်ခုပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာကြီးမှာ တကယ်တော့ လိုအပ်ချက်တွေ ပြုပြင်စရာတွေ အများကြီးပါ။ တချို့သော မဆင်မခြင်လုပ်ခဲ့တဲ့ သူတွေကြောင့် ကမ္ဘာကြီးရဲ့အခြေအနေက ပိုပိုပြီးဆိုးလာပါတယ်။ ထို့အတူပဲ လူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်အတိုင်း လိုဘတွေ လောဘတွေကြောင့် လူသားအပါအဝင် သက်ရှိမျိုးနွယ်တိုင်းမှာ ထိခိုက်မှုတွေ တပုံတပင် ခံစားရလာပါတယ်။ နိစ္စဓူဝ လုပ် ငန်းစဉ်တွေထဲမှာလည်း လုပ်ဆောင်စရာတွေ ထိန်းသိမ်းပြုပြင်စရာတွေမှ အများကြီးပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လူသိသည်ဖြစ် စေ၊ လူတွေက ချီးကျူးသည် ကဲ့ရဲ့ဝေဖန်နေသည်ဖြစ်ပါစေ မိမိလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေသည် ကမ္ဘာလောကနဲ့ သက်ရှိမျိုး နွယ်တွေအတွက် ထိခိုက်မှုမရှိဘဲ ကောင်းမွန်လှပခြင်းကို ဉီးတည်ဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုရင် မိမိလုပ်ဆောင်စရာရှိတာကို တည့် တည့်မတ်မတ် အကောင်းဆုံး ထမ်းရွက်လုပ်ဆောင်သွားလိုက်ပါလို့ ဒီနေ့အတွက် တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။